Brave Frontier: The Last Summoner 2.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Brave Frontier: The Last Summoner
Brave Frontier: The Last Summoner ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Brave Frontier: နောက်ဆုံးခေါ်သော
အာဏာရှင်စစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ဤမော်ကွန်းအလှည့်-based JRPG အတွက်စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ကမ္ဘာသစ်နောက်ကွယ်မှနက်နဲသောအရာကိုဘော်ပြတော်တစ်ခုစစ်တပ်တည်ဆောက်ရန် - သန်းပေါင်းများစွာကကစားမယ့်ဂိမ်း - ထို Brave Frontier စကွဝဠာထဲမှာစိတ်ကူးစွန့်စားမှုအပေါ်စတင်!
NOW က intensive REAL-TIME PVP နဲ့အတူ
သငျသညျအသှေးကို-မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းအခြားတူသောစိတ် RPG နိူး, ဘယ်နေရာမှာတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိစ္စရပ်များ Real-time အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲ၏ဗိုလ်ခြေရင်ဆိုင်ရအဖြစ်အဆုံးစွန်စမ်းသပ်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သေပြ! သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသှေးနှင့်စစ်အတှကျပွငျဆငျ!
ရဲရင့်တောင်တန်း: အဆိုပါနောက်ဆုံးခေါ်သောသင်သည်တစ်ခုတည်းစစ်တိုက်ရာတွင် 25 ဇာတ်ကောင်အထိအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ကျော် get အဖြစ်သင့်ရလဒ်တွေ JRPG အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာပေးနိုင်ပါတယ်, သငျသညျစိတ်ကူးလက်နက်များရရှိရန်အဖြစ်တစ်ဦးလုံးဝစိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုခံစားရခြွင်းချက်ကျွမ်းကျင်မှုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်စတိုင်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးအထင်ကြီးသွန်းမှစတိုင်ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်အတူရန်သူများကိုချေဖျက်ရန်! တစ်ဦးရဲရင့်သစ်ကိုဤလောကသို့ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်သင်အမြဲဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ဒဏ္ဍာရီယေဘုယျဖြစ်လာ!
STATE-of-the-အေအာရ်တီဆေး HD ကို 2D JRPG
Vask ၏ကြွယ်ဝသောနှင့်တက်ကြွစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံနှင့်သင်သည်အစဉ်အမိုဘိုင်း RPG တွင်တွေ့မြင်အရှိဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာတိုက်ပွဲများပူဇော်ဖို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူ handcrafted နှင့်ကာတွန်းစတိုင် brimming ချစ်စရာကောင်းဇာတ်ကောင်, တွေ့ဆုံရန်!
သငျသညျညှိတိုက်ခိုက်မှုများကိုဖွင့်ကဲ့သို့၎င်း, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတိုက်ခြင်းအထူး Brave ကျွမ်းကျင်မှုတိုက်ဖျက်မည်နှင့်မျှမတို့ကိစ္စကသူတို့ရဲ့အရွယ်အစား, သင့်ပြိုင်ဘက်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ခွန်အားကြီးသောဝိညာဉ်ကိုခေါ်သောရှိရာအထိ 50 ဇာတ်ကောင်မော်ကွန်းအချိုးအစား၏အလှည့်-based တိုက်ပွဲများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ!
လူသားတွေဟာ, Giants, Undines & ပိုပြီး -7ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်စုစည်းဖြည့်စွက်, သင်သည်သူတို့၏စစ်မှန်တဲ့အလားအလာတိုက်ဖျက်မည်သူတို့ကို, လေ့ကျင့်အထူးပြုနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲအဖြစ်သင်တို့အဘို့လက်နက်ယူဖို့အဆင်သင့်သြဇာသူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းအဖြစ်၏ကြီးမားသောသွန်းစည်းဝေး!
သငျသညျရိုက်ကူးခြင်း-အားပေး, သင့်လမ်းကြောင်းကိုအတွက်ဘာမှဖျက်ဆီးအထိ upgrade လုပ်လို့ရပါပြီအထူးကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်တိုးမြှင့်ဖို့ခဲယဉ်း-နှိပ်ခြင်းမှ,9လက်နက်အမျိုးအစားများနှင့်အတူစမ်းသပ်အဖြစ်မဟာဗျူဟာ၏မာစတာဖြစ်လာ - ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတကယ်အဆုံးမဲ့များမှာ!
ထောင့်ကို AT ကြံစည်မှု Twisted
သငျသညျမွငျကှငျး၏ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များ, ဆုံးရှုံးမှု, ရဲစွမ်းသတ္တိဂုဏ်အသရေ၏တစ်ဦးပုံပြင်သို့ interwoven အားလုံးထံမှဖြစ်ရပ်များ defining သမိုင်းသက်သေခံအဖြစ်အတူတကွနောက်ဆုံးခေါ်သောရဲ့မရေမတွက်ဇာတ်လမ်း၏ပဟေဠိအပိုင်းပိုင်းထားပါ! သငျသညျ, ခေါ်သောအဆိုပါ bifrosts နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားကိုရှာဖွေကြမည်နည်း
ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများ, High-end ဂရပ်ဖစ်, ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ကြိုက်နဲ့ content-ကြွယ်ဝသောပုံပြင်များ featuring သင့်ရဲ့အများဆုံးထူးခြားသောစွန့်စားမှုအပေါ်စတင်! စူပါပရိတ်သတ်များ JRPG အသုံးပြုပုံ JRPG ပရိသတ်တွေအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏!
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ hi လို့ပြောလာကြ:
Facebook မှာ: https://www.fb.me/BraveFrontierTheLastSummoner/
Youtube ကို: https://www.youtube.com/channel/UCM3yOUaP3z7ts5MBFGxM-5w
ဒီ app ကို download လုပ်ပါနှင့်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကကို virtual ပစ္စည်းများကိုအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Brave Frontier: The Last Summoner အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Brave Frontier: The Last Summoner အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Brave Frontier: The Last Summoner အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Brave Frontier: The Last Summoner အား အခ်က္ျပပါ
official-app စတိုး 985 921.54k
Brave Frontier: The Last Summoner ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Brave Frontier: The Last Summoner အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.1.0
ထုတ်လုပ်သူ gumi Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.lastsummoner.com/en/legal-mentions
Release date: 2019-01-07 03:29:02
လက်မှတ် SHA1: 1E:0D:37:EF:CC:3A:58:8D:54:1C:3B:0D:A3:B0:7C:55:04:3E:8C:63
Brave Frontier: The Last Summoner APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ